N'ala PVC, kọwaa ụdị onye ị bụ! - Akụkọ-Topflor China nwere oke
Echiche:57 Onye edemede: Onye ndezi saịtị Bipụta Oge: 2020-10-14 Mmalite: Saịtị
Floorlọ PVC bụ ụdị nke na-agbanwe ala, ọ dị mma ịkpụ; na usoro ntanye, o nwere teknụzụ nhazi pụrụ iche pụrụ iche, nke nwere ike ịghọta mmetụta nke paịl pere mpe ma ọ bụ kpamkpam enweghị nkebi; ọ nwekwara ike inye egwuregwu zuru oke mgbe ị na-akwụrụ. Ihe okike onye mebere ya, agba ya na agbacha agba dị n’etiti agba dị iche iche, yana igbu ya na ịkpụpụta ụdị ọmarịcha ahaziri iche nke ọma!
Obere obere mmiri bụ nnukwu uru. Uru nke ụlọ ala PVC na seams na njirimara nke mbelata dị mfe na-eme ka ọ nwee nnukwu uru pụrụ iche ma e jiri ya tụnyere ụlọ ndị ọzọ!
1. Ike mgbochi nsị na nje nje
Njikọ nke ala PVC dị obere, nke bụ nnukwu ọganiihu ma e jiri ya tụnyere ala nke ọtụtụ ihe ndị ọzọ: ohere nke ijigide unyi na nkwonkwo nke ala na-ebelata, ọ na-enyekwa aka karịa ịmepụta gburugburu ebe dị ọcha ma dị ọcha! N'ebe ndị dị ka ọdụ ụgbọ elu, ọdụ, ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ ọta akara, ọfịs na ụlọ ọgwụ na-achọ ka mmetọ na mmegide nje dị elu, ụlọ PVC abụrụla nhọrọ mbụ!
2. Mee ka ala maa mma
Self-nyagide flooring na kpochidoro flooring na-ewu ewu na China maka ịkwanyere mpempe akwụkwọ flooring. Nkọwapụta na akụkụ nke mpempe akwụkwọ ọ bụla yiri osisi osisi. Mgbe emechara ya ma mezie ya, oghere ndị ahụ dị obere ma sie ike ịhụ site n’ebe dị anya. N'ihu. Ọ bụrụ n’echiche na ụkpụrụ ga-apụta n’alụghị di na nwunye, ị nwere ike ịhọrọ usoro abụọ iji gbakọta n’oge a na-eme paịve, n’ihi na ọnya ahụ pere mpe nke ukwuu ma ntanye nsonaazụ ga-adị oke mma!
3. pudị mgbagwoju anya, njirimara zuru ezu nke ihe okike
Nkọwa nke PVC windo a na-ekpuchi ekpuchi n'ozuzu ya bụ mita 2-3 n'obosara na mita 15-30 n'ogologo. E jiri ya tụnyere mpempe akwụkwọ, ọ dị nro ma dị mfe ịkpụ. A na-agbanye nkwonkwo site na wiwi pụrụ iche. , Nwere ike ịbụ kpamkpam enweghị nkebi. N’ezie usoro eji eme ihe dị mfe, ịhakọ agba na ime Mozis ka mfe iji rụọ ọrụ; thelọ a na-ekpuchi PVC n'onwe ya bara ọgaranya na usoro agba, yana oghere okike nke enwere ike iji ya na agba agba ya na oke mosaic dị oke ma mara mma. Imewe zuru ezu iji mee ka ala bụrụ ọrụ ọrụ nka, ma mee ka gburugburu ebe niile juputara na nka!